एउटा मानिस सम्पूर्ण मानिस हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली | suryakhabar.com
Home राजनीति एउटा मानिस सम्पूर्ण मानिस हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली
on: September 27, 2018 In: राजनीतिTags: No Comments
प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ११ गते महासभालाई सम्बोधन गर्दै छन् । उनले अघिल्लो पटक र यस पटक अमेरिका भ्रमण गर्दाको नेपालको अवस्था निकै फरक रहेको बताउँदै नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिका विषयमा विश्वलाई जानकारी दिने र नेपाली जनताको प्रगतिमा उनीहरूको सहयोग जुटाउने आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिइएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
प्रश्नः यस पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
प्रश्नः महासभा महाधिवेशन बाहिर भेटघाटमा कस्ता अभिव्यक्ति आए ?
–मैले स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपतिसँग भेट गरेँ । बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेँ । क्यानडाका प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेट गरेँ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेट गरेँ । औपचारिक वा अनौपचारिक ढुङ्गले भेटघाट भइरहेका छन् ।
प्रश्नः भोलिको महासभालाई सम्बोधन गर्दा के सन्देश दिन खोज्नुभएको छ ?
प्रश्नः ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ आन्तरिक रूपमा अति आवश्यक छ तर विभाजित विश्वमा नेपालले कसरी सहयोग प्राप्त गर्ने ?
–संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा महासभाका अध्यक्ष र महासचिवले राखेका कुराले अर्थ राख्छ । उहाँहरूको सोचाइमा राष्ट्रहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व भएको पाइयो । राष्ट्र सङ्घको सोचाइले विषय दिन्छ । महासभाका अध्यक्षका अभिव्यक्ति सामाजिक जागरणको पक्षमा महत्वपूर्ण छ । अध्यक्षका सात बुँदाले पूर्ण लोकतन्त्र इङ्गित गर्छ । कसैले सैद्धान्तिक आग्रहले शब्द चुट्न सक्छ । हाम्रो प्रश्न शब्दसँग होइन समाजवादोन्मुख सामाजिक व्यवस्थासँग छ ।
प्रश्नः शान्ति स्थापनामा आएको रकम घट्दो छ । विरोध पनि छ नि ?
प्रश्नः शान्ति सेनामा खर्च कटौतीको कुरा नि ?
प्रश्नः भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भएका वार्ताका विषय ?
प्रश्नः स्थायी कूटनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने कुरा ?
केराले बजार नपाएपछि भैँसीलाई कुँडो